Ebe anyị enweghị ike imeri: n'etiti akwụkwọ akụkọ mpụ na paranormal | Akwụkwọ ugbu a
Ebe a na-apụghị imeri anyị
Ebe a na-apụghị imeri anyị bụ akwụkwọ akụkọ mpụ nke onye edemede Spain María Oruña. E bipụtara mbipụta mbụ ya na Eprel 2018 ma bụrụ nkeji nke atọ nke usoro Cantabrian Akwụkwọ Puerto Escondido. Dị ka isiakwụkwọ ndị bu ụzọ, akụkọ ahụ metụtara otu ihe atụ na ndị na -eme ngagharị iwe - ndị nnọchianya Valentina na Oliver -, n'agbanyeghị na ọ na -ewepụta atụmatụ nke ya, nwere ntụgharị pụrụ iche.
Otu n'ime ihe dị iche iche dị n'akwụkwọ a gbasara ndị bu ya ụzọ bụ itinye isiokwu na -enweghị isi. Maka ya, Oruña mere usoro nyocha sara mbara, ya na ndị ọkachamara gbara ajụjụ ọnụ na akwụkwọ sara mbara. Akụkọ ahụ, mgbe ahụ, na -abanye n'ime ụwa mmụọ dị omimi, nke sayensị na -enweghị nkọwa ọ bụla. Mgbanwe ọnọdụ ihe atụ a na -eme ka onye na -agụ ya na -atụgharị uche n'etiti ihe dị adị na ihe na -abụghị.
1 Nchịkọta ebe anyị enweghị ike imeri
1.1 Nnyocha ọhụrụ
1.2 Data mbụ
1.3 Ajụjụ ọnụ onye nketa
1.4 Ihe mmekpa ahụ
2 Nnyocha ebe anyị enweghị ike imeri
2.1 Isi nkọwa nke ọrụ ahụ
2.3.1 Charles Green
2.3.2 Valentina gburugburu
2.4.1 Ụzọ edemede
2.4.2 Ntọala egwu
2.4.3 Aha onye protagonist
3 Banyere onye edemede, María Oruña
Na nchikota nke Ebe a na-apụghị imeri anyị
Valentina na -ekele enyi ya nwoke Oliver, banye n'ụgbọ ala wee kwadebe ịhapụ ụlọ ya ka ọ gaa Santander. Ebe ahụ, onye ọchịagha a na -eduzi mpaghara nyocha nke UOPJ. Na mberede, na -enweta oku sitere na Captain Marcos Caruso, onye na -agwa ya na ọ ga -aga Suances, ọkachasị n'obí Quinta del Amo, ebe ọ bụ onye na -elekọta ubi -Leo Diaz- apụtala na ọ nwụrụ anwụ na -acha akwụkwọ ndụ nke ebe ahụ.
N'ụlọ bụ onye na -eme nchọpụta Clara Múgica, onye - mgbe nyochachara ozu ochie Leo— na -eche na ọ nwụrụ n'ihi nkụchi obi. Valentina rutere ebe ahụ ma ọkachamara gwara ya ozugbo gbasara nkọwa ọnwụ ahụ. Nke a ga -eme na -egosi na ọ nwụrụ n'ihe dịka elekere iri na otu nke abalị, na na, na mgbakwunye, mmadụ emechiela anya ha. Nkọwa ikpeazụ a mere ka onye ọrụ ahụ nwee mmasị.
Ajụjụ ọnụ onye nketa
Lieutenant na -amalite ịhụ ihe niile dị n'akụkụ onye ahụ nwụrụ anwụ, nke na -enye ya ohere ịmasị etu ụlọ ahụ si saa mbara ma maa mma. N'ebe dị anya ọ na -ahụ nwa okorobịa, ọ nọ nso Charles Green, onye ị ga -agba ajụjụ, ebe ọ bụ ọ bụ ya hụrụ ozu ahụ. Nwoke ahụ bụ onye edemede na onye nwe ala ahụ, ọ nọ ebe ahụ ka ọ nọrọ oge ọkọchị, mechaa ihe odide nke akwụkwọ ọhụrụ ya wee ree ụlọ ahụ.
Ihe mmekpa ahụ
Green na -egosipụta nye Valentina na ndị enyi ya —Riveiro na Sabadelle— na ihe dị ịtụnanya na -eme na nke ise. Kemgbe ọ bịarutere, ọ hụla mkpọtụ dị iche iche, ọnụnọ na -enweghị nkọwa yana ọbụna teta ụra na ahụ ya na -enweghị ihe kpatara ya. N'agbanyeghị na ọ na -enwe obi abụọ, onye ọchịagha ga -ajụ maka ihe ndị a na -eme na otu ha si emetụta ọnwụ onye ọrụ ubi.
Nke a bụ ka akụkọ si malite na njikọta njem Green gaa n'oge gara aga - onye na -echeta oge ntorobịa ya na oge ọkọchị na Suances-, yana ihe omimi agbakwunyere na Quinta del Amo. N'oge niile a na -eme nyocha banyere ọnwụ Díaz na ihe omume mmụọ. A ga -ajụ ndị nke ikpeazụ na Prọfesọ Machín, onye na -enye nkuzi maka ụlọ ọrụ na ihe ịtụnanya.
Nyocha nke Ebe a na-apụghị imeri anyị
Isi nkọwa nke ọrụ ahụ
Ebe a na-apụghị imeri anyị Edebere ya na mpaghara Suances, Spain. Akwụkwọ nwere Peeji 414 kesara n'etiti isiakwụkwọ 15, ebe a na -emepụta atụmatụ atọ n'okpuru ụdị akụkọ abụọ. Enwere onye maara ihe nke atọ maara ihe nke na -akọwa ahụmịhe nke ndị odide, na onye ọzọ na onye mbụ nke ahụ na -akọ akụkọ nke Carlos Green dere.
Dị ka nnyefe izizi, Oruña megharịrị akụkọ a na Cantabria, kpọmkwem n'ime nnukwu Obí Nna -ukwu. Onye ode akwụkwọ ahụ kọwara ebe ahụ n'ụzọ pụrụ iche, yana ọnọdụ ndị ọzọ na Suances. Ọrụ nyocha na -agwụ ike nke Spanish, onye nwere nkọwa dị mma jisiri ike nyefee onye na -agụ ya na ntọala ndị a dị ebube.
Ọ bụ onye edemede America na -eto eto. Ọ bi na California na na -aga Suances ka ọ dee akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya. Nne nne ya Martha - onye nwụrụ n'afọ gara aga - hapụrụ ya ka ọ bụrụ naanị onye ga -eketa Obí a na -akpọ "Quinta del Amo". Carlos ji nnukwu agụụ agụụ cheta ebe ahụ, ebe ọ nọrọ ọtụtụ oge ezumike ya ebe ahụ ma nwee ahụmịhe mbụ ya na sọọfụ.
Ọ bụ protagonist nke usoro, onye uwe ojii sitere na ndị ọrụ nchekwa obodo nke Spain bụ onye isi na ngalaba Organic nke ndị uwe ojii ikpe (UOPJ). Ọnwa isii gara aga, ọ kwagara Villa Marina, na Suances, ya na enyi ya nwoke Oliver. Kemgbe ahụ ndụ ya adịla jụụ ma kwụsie ike.
Ọ bụ prọfesọ nwere ahụmịhe gbasara akparamaagwa mmụọ, ọ nọ n'ime obodo ka ọ na -ekwu okwu nkuzi na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihe nkiri. A na -eme mkparịta ụka ndị a na amphitheater nke Palacio de La Magdalena, ebe ọ na -ekerịta ya na nwa akwụkwọ ọkachamara na isiokwu ahụ.
N'ihi ihe ịga nke ọma nke Ngalaba Akwụkwọ Puerto Escondido - ebe ọ bụ na nke a debere Suances dịka naanị ogbo-, Ndị kansụl obodo mere na 2016 ụzọ Puerto Escondido Literary Route. N'ebe ahụ, ndị ọbịa nwere ike ịgafe oghere niile ewepụtara na akwụkwọ akụkọ.
Onye edemede Spanish na -akọwa akụkọ ya na ntinye egwu dị iche iche n'oge mmepe akụkọ ahụ. Maka nkeji nkeji a, o tinyere isiokwu egwu 6, ndepụta enwere ike ịnụ ụtọ ya n'elu ikpo okwu Spotify, na aha: Egwu -Ebe Anyị Na -enweghị Ike- Spotify.
Aha onye protagonist
Oruña kwupụtara na mkparịta ụka ya na Montse García maka ọnụ ụzọ Olu Galicia, que aha onye protagonist nke usoro ahụ, Valentina Redondo, bụ mmegharị aka n'ebe onye edemede Dolores Redondo nọ. Banyere nke a, o kwupụtara: "ọ bụ nkeonwe, n'ihi na maka m, dị ka onye edemede, ọ na -egosi na" akwụsịla nrọ, "n'ihi na ọ gbara m ume ka m gaa n'ihu na -arụ ọrụ mgbe m na -echedịghị ibipụta akwụkwọ."
Banyere onye edemede, María Oruña
Onye edemede Galician Maria Oruña Reinoso A mụrụ ya na Vigo (Spain) na 1976. Ọ mụrụ iwu na mahadum, ọrụ ọ rụrụ ruo afọ iri na ọrụ na azụmahịa. Mgbe oge ahụ gasịrị, o tinyere onwe ya kpam kpam na akwụkwọ. Na 2013, o bipụtara Aka onye na -agba ụta, ọrụ mbụ ya, akwụkwọ akụkọ nwere isiokwu ọrụ, dabere na ahụmịhe ọkachamara ya dị ka onye ọka iwu.
Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, o gosipụtara akwụkwọ edemede ya nke abụọ, mpụta mbụ na ụdị akụkọ mpụ: Mmiri zoro ezo n'ọdụ ụgbọ mmiri (2015). Ya na ya malitere usoro egwu ya Akwụkwọ Puerto Escondido, nke nwere Cantabria dịka isi ogbo ya. Ebe a dị ezigbo mkpa maka onye edemede, ebe ọ maara ya nke ọma kemgbe ọ bụ nwata; ọ bụghị n'efu ka ọ na -akọwa ya nke ọma na akụkọ ya.
Daalụ maka ịga nke ọma na nkeji nkeji nke mbụ a, afọ ole na ole ka e mesịrị, o dere: Ebe aga (2017), yana ndị na -agụ akwụkwọ nabatara ya nke ukwuu. Ruo ugbu a usoro ahụ nwere akwụkwọ akụkọ abụọ ọzọ: Ebe a na-apụghị imeri anyị (2018) na Ihe mmiri na -ezo (2021). N'etiti akụkọ abụọ a, ndị Spanish gosipụtara: Ohia nke ikuku ikuku ano (2020).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Ebe a na-apụghị imeri anyị
Mario Villén Lucena. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede Nazarí
Ọgọst. Nhọrọ nke akụkọ akụkọ